अर्थमन्त्रीलाई गगनका कटाक्षः २ महिना लकडाउनमा राखेर ५ दिनमै कर, बिद्वान मन्त्रीले भनेपछि मान्नैपर्याे! – PathivaraOnline
Home > समाचार > अर्थमन्त्रीलाई गगनका कटाक्षः २ महिना लकडाउनमा राखेर ५ दिनमै कर, बिद्वान मन्त्रीले भनेपछि मान्नैपर्याे!
admin June 3, 2020 June 3, 2020 समाचार 0
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले लकडाउनको अवधिमा आयकर चुक्ता गर्ने सरकारी सूचनाको विरोध जनाएका छन्। मूल्य अभिवृद्धि कर,अन्तःशुल्क,आयकर चुक्ता गर्न सरकारले जेठ २५ सम्मको समयसीमा दिएर मंगलबार सूचना जारी गरेको थियो। लकडाउनको अवधिमा व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योग सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा करको ताकेता गर्दा व्यवसायी सरकारसँग रुष्ट बनेका छन्।
यस्तो छ गगन थापाको पोस्ट
अर्थमन्त्रीज्युले व्यवसाय कसरी चल्छ भन्ने किताबमा मात्र पढ्नु भएको भएर नै होला,२ महिना लकडाउनमा राखेर, लकडाउनकै अवधिको ५ दिनको समय दिएर कर तिर्न हुकुम भएको !! अनि कर तिर्ने कार्यालयमा लाममा बस्दा चाहिँकोरोना संक्रमणको डर नहुने रहेछ!!
विद्वान मन्त्रीले भने पछि पत्याउनै पर्यो!
तो’डफो’ड र अवरो’ध भए यस्तो छ प्रहरीहरूकाे सुरक्षा बिशेष रणनिति!
यसरी फिर्ता लिए इटहरीका मेयर द्वारिकालाल चाैधरीले आफ्नै अभिव्यक्ति!